Tetikasa - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Ny famolavolana YALIS dia afaka manome ny takian'ny fitaovana arafitri-baravaranao, manomboka amin'ny vavahady ka hatramin'ny fantsom-baravarana, ny mpiambina ny varavarana ka hatramin'ny mpijery varavarana, ny mpiambina ny varavarana ka hatramin'ny tokonam-baravarana ary ny varavarana akaiky kokoa, ny YALIS dia mahazo serivisy ho an'ny vahaolana momba ny varavarana miorina amin'ny firaka zinc, firaka aliminioma ary tsy misy fangarony. fitaovana vy.
YALIS Design dia afaka mifanaraka amin'ny tetik'asa fanorenanao, ary eto ny sasany amin'ireo tetikasanay fananganana sy tranobe miorina amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Any Lake Chongqing no misy ny International Lake City, ny mampivoatra dia i Xiangjiang International China Real Estate Co., Ltd. Anisan'izany ny varotra sy ny trano fonenana, toy ny hotely, villa, birao, trano ary fizahan-tany fizahan-tany. Voninahitra i YALIS handray anjara amin'ity tetik'asa ity ary ho mpikambana iray hanome fitaovana amam-baravarana.
Australia River-vato dia namboarina tamin'ny andianà hidin-trano YALIS BF74204 ho an'ny tetikasany iray manontolo. Miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny kalitao, YALIS dia nanomboka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny tsena aostralianina.
Blooming Tower no tetik'asa tilikambo roa voalohany ao Da City City izay nanomboka ny fanamboarana ny volana Jona 2008 miaraka amin'ny ambaratongan'ny fananganana isaky ny tilikambo 37 rihana. Nomena ny entana: hidy Smart ho an'ny varavarana fidirana ao amin'ny HIONE ary hidiny miaraka amin'ny kojakoja Yalis.
Autumn Garden dia any Shanghai, faritra CBD. Noraisin'izy ireo ny andiana hidin-trano YALIS BF7037 ho an'ny tetikasany iray manontolo. Ny fampifangaroana ireo villa miaraka amin'ny fitaovana avo lenta avo lenta, voafaritra ny trano dia namboarina.
Hotel Baltschug Kempinski Moskoa
YALIS BF andiana vavahady, no nampiasaina tao amin'ny Hotel Baltschug any Kempinski, Moskoa. YALIS, mpamatsy hidin-trano ho an'ny tetikasa manokana.
Jordan Springs any Israel
Israel Jordan Springs dia tetikasa malaza izay misy farihy 3, toeram-pivarotana ary zaridaina. Tetikasa sahabo ho 230 hm² izay mampiasa lakile YALIS BF74223 & BF74229 nizara fotoana.